अब तीन दिनमै मिल्छ पासपोर्ट ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अन्य > अब तीन दिनमै मिल्छ पासपोर्ट !
काठमाण्डौं । राहदानी विभागले १० हजार रुपैयाँ तिरेर एक हप्तामा पाइने राहदानीलाई अब तीन दिनमै प्रदान गर्ने भएको छ। असार १५ गतेदेखि तीन दिनभित्रै राहदानी पाउने व्यवस्था मिलाइएको विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले जानकारी दिए।
‘अहिलेसम्म रु १० हजार तिरेर एक हप्तामा पाउने राहदानी अब सोही शुल्कमा नै तीन दिनमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ,’ उनले भने। हिजो बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राहदानी लिने समय शुल्कबारे निर्णय गरेको थियो ।
३ असार २०७३, ४।००
२०७३ असार ३ गते १६:५९ मा प्रकाशित
युरोकपको आजको खेल ईटाली र स्वीडेनबीच !
इन्भेष्टमेण्ट बैंकले यसरी बाँड्दैछ आज सेयर !
तपाईसँग कति कित्ता सेयर छ ? पाउँदै हुनुहुन्छ २५% बोनस
पशुपतिमा १७ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार
डलर भाउ दैनिक सस्तिदै, १ डलर खरिद गर्न ११३ रुपैयाँ लाग्ने